Xalka sare ee Microsoft Exchange Server 2013
Xalalka Horukacsan ee Heerka Sare ee Microsoft Exchange Server 2013 wuxuu ka kooban yahay xusuusto baahida loo qabo inuu helo karti iyo macluumaad si loo qorsheeyo & loo xakameeyo xaalada wargelinta ee Microsoft Exchange Server 2013. On fursad ah oo aad si rasmi ah u baaray Core Solutions ee Microsoft Exchange Server 2013, waxaad ka qaadan kartaa barnaamijkan si loo hagaajiyo ururka of Exchange Server.
Xalalka Horukacsan ee Macaamiisha Microsoft Exchange Server 2013 waxaa lagu kasban karaa adoo isku dayaya inaad ku dadaashaan maamulayaasha wargalinta heerka, khabiirada IT, iyo caawinta shaqaalaha goobta shaqada ee u baahan in ay bartaan Exchange Server 2013. Koorsadani waxay ku tusineysaa qaabka naqshadeynta Exchange Server 2013 & wuxuu bixiyaa tilmaamaha, farsamooyinka ugu fiican, iyo fekerka si ay kaaga caawiyaan inaad u soo dirto Exchange Server-kagaysan. Waxa intaa ka badan, barnaamijkan waxaa loo soo jeediyey sida diyaarinta maaddooyinka loogu talagalay takhasusaha IT-da oo soo bandhigi doona imtixaanka sare ee Microsoft Exchange Server 2013, ama sida lagama maarmaanka u ah aqoonsiga Microsoft Exchange Server 2013 (MCSE). Haddii aad isku daydo inaad isku qorto koorsada, ka dibna waa inaadan hoos imaanin 3 asalkooda shaqaynta ee IT-gaar ahaan gudaha barkadda ururada nidaamka, qaab dhismeedka qaabka ama goobta shaqada. Sida fahamsan, waxaa lagaa filayaa inaad la shaqeysiisay Exchange Server 2013 ama kuwa kale ka hor intaan la adeegsan Exchange Server.
-> Maxaad ka soo qaadan kartaa miraayadda koorsada?
Markaad dhameysato kooraska, waxaad awood u yeelan doontaa inaad:
Qalabaynta & fulinta Exchange Server 2013.
Usheega dheelitirka diyaar u noqoshada hawlaha Exchange Server 2013.
Qalabaynta & fulinta nidaamyada nidaamka wargelinta aan ahayn ee Exchange-ka ee Exchange Server, iyo kobcinta horay u socotay ka hor inta aan la kala qaadin Exchange Server.
Qalabaynta & fulinta dabacsanaanta goobta Exchange Server 2013.
Fariinta iyo fariinta fariinta gudbinta amniga.
Qalabaynta & fulinta farriinta dayactirka ee Exchange Server 2013.
Qalabaynta & hirgelinta amniga maamulka ee nidaamka Exchange Server 2013.
Qalabaynta & fulinta wargelinta isku dheelitirnaanta.
Codso inter-commine-& Windows PowerShell® 3.0 si guddoomiyaha Exchange Server 2013.
Qalabaynta & fulinta isuduwidda wargelinta.
Qalabaynta & fulinta ku biirista Exchange Online.
-> Muxuu yahay aqoonta asaasiga ah ee asaasiga ah ee looga baahan yahay inuu u qalmo koorsadan?
Marka laga reebo waaya-aragnimo khibrad leh, waa inaad haysataa u-qalmitaanka takhasuska leh ee ku saabsan fursadda aad u-baahan tahay inaad aado barnaamijkan:
Xaqiijinta Mabaadiida Macaamilka Microsoft Exchange Server 2013, ama barnaamij saami dhexdhexaad ah
Ma jirto wax ka yar laba sano oo aqoon u leh shaqada Exchange Server
Laba sano oo ka mid ah ka qaybqaadashada kormeerka Windows Server, iyo sidoo kale Windows Server 2012 ama Windows Server 2008 R2
Wax ka yar lix bilood ee aqoonta shaqada leh Exchange Server 2013 ama Exchange Server 2010
Laba sano oo ka mid ah aqoonta shaqada oo leh magac go'aaminta, tirinta DNS
Laba sano oo ka mid ah aqoonta shaqo ee loo yaqaan 'Active Directory'
Aqoonta shaqada ee Windows PowerShell
Qorshaha asaasiga ah ee dokumentiyada, tusaale ahaan, qoraallada PKI (Kaabayaasha Dadweynaha)
Haddii aad u baahato inaad u tagto barnaamijkan diyaarinta, waxaad ku qancin kartaa macnaha adoo adeegsanaya kumbuyuutarka Microsoft Exchange Server 2013 ama adoo helaya waxbarasho iyo qaabab kale oo la xiriira. Waxaa laguu soo jeedinayaa inaad la xiriirto bixiyaha diyaarinta ee la ansixiyey si loo fuliyo xaqiijinta.
Microsoft Dynamics 365 | Isugeynta CRM & ERP